Waa maxay kaadhka xusuusta loo isticimaalaa?
Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo ugu ammaan siyaabo si loo hubiyo in xogta la kaliya ma hayo kaadhka xusuusta laakiin waxaa sidoo kale heli marka loo baahan yahay. Kaararka xusuusta waa hab aad u ammaan ah si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab muujinayaa tayo iyo fasalka. Ayado maanta kaararka xusuusta waxaa badanaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in aan kaliya cams iyo sida badhamo la xiriira aadna ku badbaaddeen, laakiin dadka isticmaala telefoonka mobile sidoo kale in la hubiyo in kaararka xusuusta waxaa loo isticmaalaa in ay sii madadaalo iyo Chine ee mobile ka dhan mid ka mid meel. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in kaararka xusuusta aan la hayaa kaliya amaan iyo kalsooni Carro, laakiin waxay sidoo kale ka badbaadiyay gaadhista si toos ah iftiinka qoraxda ka. Qaybta dambe ee tutorial ka dhigi doonaa in la hubiyo in ay Talooyin iyo tabaha loo siiyaa dadka isticmaala si aad u hubiso in ay kaliya ma ahan hesho natiijooyinka ugu fiican marka laga eego xagga nolosha kaadhka xusuusta laakiin sidoo kale in la hubiyo in kaarka la isticmaali xataa haddii nolosha qofka ee kaarka ayaa ku dhameysatay.
Sababaha kaadhka xusuusta macluumaadka khasaaro
Kaararka xusuustiisu inkastoo ay galisay makaaniga kaydinta guud oo ku Arzaaqay oo user natiijada ugu fiican wali element ee la hubin weli waxaa jira oo farta ku wajahan xaqiiqada ah in khasaaraha xogta in kaadhka xusuusta ma aha heshiis weyn oo dhan iyo user waa in warqabaan arrinta in la wajahay yaabaa in arrintan la xiriira. Ka dib markii qaar ka mid ah sababaha in ay horseedi karto in xogta dhammaan heerarka kala duwan ee kaadhka xusuusta:
1. Baadi Human waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn oo keeni in arrinta khasaaro xog ku saabsan kaadhka xusuusta. Waxaa dhici karta la kala iibsiga xogta sugneeyn ama isticmaalaya kaadhka xusuusta hab aan macquul ahayn.
2. takrifal kaarka sidoo kale keenaysaa in arrimaha. Waxaa loola jeedaa in user uu qaatay kaarka ka soo booska halka xogta la wareejiyo.
3. gaadhista ayaa kulaylka iyo qorraxdu si toos ah ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in xaalada ayaa ah mid soo food saaray dadka isticmaala ee arrintan la xiriira. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in uu kaydiyo kaarka meel qalalan oo ka fog iftiinka qoraxda si ay xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin by user ee arrintan la xiriira.
Xogta Irrecoverable ka kaadhka xusuusta
Waxaa jira sababo badan oo ah kuwa aad u daran oo keeni arrintan xogta irrecoverable ka kaadhka xusuusta. User ayaa arrintan la xiriira marnaba isku daydaa inaad soo celin xog iyo talo khabiir la dooni waa in la hubiyo in dhaawaca uu sii waxaa loogu hortegi iyo xogta la soo kabsaday karo. Ka dib waa laba sababood ee ugu muhiimsan ee aan la diidi karaa marka ay timaado xogta irrecoverable ka kaadhka xusuusta iyo user sidoo kale waa aanay waxba qaban karin,
1. dhaawac jirka Buuxi waa mid ka mid ah sababaha ugu badan oo keeni in arrinta sakhiray. Data yahay si kastaba ha ahaatee recoverable iyadoo la kaashanayo state of qalabka farshaxanka iyo farsamooyinka sare iyo user waa in la hubiyo in arrinta la xalin lahaa inay qaadato gargaar xirfadeed arrintan la xiriira in ay ka fogaadaan arrimaha dheeraad ah in lagu wajahay laga yaabaa.
2. Sababta labaad kaas oo xogta marna soo kabsaday waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in la overwritten. Mar farsamooyinka casri ah loo isticmaali karo si loo hubiyo in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira, laakiin weli talo khabiir noqdo waajib ah oo waa in la qaadaa si looga fogaado wixii khasaare ah ee arrintan la xiriira.
Waxaa sidoo kale in la xuso in ay jiraan arrimo kala duduwan in sidoo kale ay keeni karaan xogta irrecoverable iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in booqo forums online iyo sidoo kale dhejin kartaa su'aalo arrintan la xiriira si loo hubiyo in dhibaatadu tahay xalin. The forums online waa meel fiican si loo hubiyo in gobolka adeegyada farshaxanka aan ku riyaaqay kaliya laakiin qaraarkii ayaa waxaa sidoo kale posted wax waqti ah gudahood oo dhan iyadoo ay jiraan dad kale oo u isticmaalaya dhufto ee kuwan.
Sidee inuu ka soo kabsado kaadhka xusuusta la mid click
Waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijyo lacag la'aan ah in la hubiyo in arrinta dib u soo kabashada xogta loo xalin lahaa sida ugu dhakhsaha badan, laakiin loo baahan yahay ee saacaddii waa in la hubiyo in dhibaatada la waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira iyo user helo natiijada ugu wanaagsan sameeyaan. Wondershare Data Recovery waa hal barnaamij oo kale taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo soo kabanayo xogta gudaha wakhtiga oo aan ka kaaftoomi kasta. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in software waa in marka hore la isku dayay in ka hor go'aanka wax iibsiga ee la sameeyo waana sidaas darteed loo baahan yahay si loo hubiyo in talaabooyinka hoos ku xusan waxaa lagu soo raacay sameeyo. Iyadoo 550+ awoodda qaab dib u soo celinta Wondershare Data Recovery waa barnaamij in uu ka sarre maray dooni user iyo resultantly waxaa la cadeeyay in barnaamijka uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican si loo hubiyo in dib u soo kabashada xogta jirin kulanka oo dhan.
Tallaabooyinka loo raaco waa sida soo socota:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html waa meel user inay hubiyaan in barnaamijka la soo bixi samayn kartaa:
2. nooca file waa in la cayimay mid kastaba:
3. goobta soo gaartay waa ka dibna in la cayimay mid kastaba:
4. Marka files waxaa lagu soo celiyo mid ka mid ah la doonayo waa in la riixi si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo garaacida ka soo kabsado button:
Xogta aan la soo kabsaday karaan, waa maxay sababta?
Software ayaa shaki la'aan waa waxa ugu fiican si loo hubiyo in xogta lumay aan la soo kabsaday oo kaliya laakiin user helo heshiis wanaagsan ee arrintan la xiriira. Si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in talaabooyin taxaddar ayaa laga qaadayaa. Ugu horreeyey iyo weliba qiyaastii dhimanayd oo kaliya ay sabab u tahay taas oo arrinta ku dhici kartaa waa xaqiiqda ah in barnaamijka ayaa lagu rakibay on drive la mid ah kaas oo wax kaqabashada xogta loo baahan yahay oo haatan ay tahay in la xuso in xogta ayaa la chocked oo aan la soo kabsaday karo .
About noocyada kaadhka xusuusta
Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan in la ogaado in noocyada kaadhka xusuusta waxaa lagu qeexaa hab ugu fiican. Si aad u isticmaala ka warqabin xaqiiqada ah ee soo socda waa qaar ka mid ah noocyada kaadhka xusuusta oo loo tixgeliyo halka samaynta iibsiga:
1. kaararka SD sii daayay sanadkii 1999-
2. kaararka SDHC sii daayay sanadkii 2006-
3. kaararka SDXC sii daayay sanadkii 2009-
> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado kaadhka xusuusta on Mac iyo Windows